Cod Aamusnaan 2 - Suurtagal ma tahay? - Muuqaalka Gawaarida
Leave a Comment on Cod Aamusnaan ah 2 - Suurtagal ma tahay?
Guudmarka - Cod Aamusan 2
Filimka "Codka Aamusan" wuxuu xirtay abaalmarino kala duwan wuxuuna helay sumcado aad u badan 4-tii sano ee la sii daayay. Filimku wuxuu daba socdaa sheekada gabar dhagoole ah oo la yiraahdo Shouko oo ku biiraya isla iskuulka Shoya, kaasoo bilaabaya inuu u cagajugleeyo maxaa yeelay way ka duwan tahay. Wuxuu aadayaa ilaa iyo inta uu ka tuurayo qalabkeeda waxyeellada daaqadda daaqadda xitaa wuxuu ka dhigayaa iyada dhiig hal mar ah. Cagajuglaynta waxaa kaliya dhiirrigeliya Ueno, oo ah saaxiibkii Shoya oo aad u jecel.
Cod Aamusnaan 2
Dad badan oo daawadayaal ah waxay dareemayaan trailer ka ah in tani ay tahay hal waddo oo sheeko jacayl waddo ay tahay inay ku lug leedahay labadaas astaamood, waxaad u maleyn kartaa inay tahay madax furasho ama dambi dhaaf Marka filimkan aadka loo jecelyahay ma soo laaban doonaa markii labaad si uu noo siiyo Codka Aamusan 2? Taasi waa waxa ku socday maqaalkan.
Sheeko Muhiim ah - Cod Aamusan 2
Sheekada ugu weyn ee Aamusnaanta Codka waxay raacdaa sheekada gabar dhagoole ah oo magaceeda la yiraahdo Shouko, oo lagu dhibaateeyo iskuulka maxaa yeelay waxaa loo arkaa inay ka duwan tahay naafonimadeeda darteed. Bilowga sheekada waxay adeegsaneysaa buuga xusuus qor si ay ulaxariirto ardayda kale iyaga oo adeegsanaya iyaga oo ku qoraya su'aalaha buugga iyo Shouko oo qoraya jawaabaheeda. Marka hore waa Ueno oo ku jeesjeesa Shouko buugteeda darteed, laakiin markii dambe Shoya, Ueno saaxiibkeed wuxuu ku biirayaa xoogsheegashada, isagoo ku jeesjeesaya Shouko isagoo xadaya qalabka gargaarka maqalka oo iska tuuraya. Sidoo kale wuxuu ku jeesjeesaa sida ay u hadleyso, maadaama Shouko aysan maqli karin codka codkeeda. Tani dhammaantood waa muhiim marka la eego suurtagalnimada Cod Aamusnaan ah 2.
Xoog-sheegashadu way socotaa illaa Shouko hooyadeed lagu qasbay inay cabasho rasmi ah u gudbiso dugsiga, iyadoo isku dayaysa inay joojiso xoog-sheegashada. Markii ay Shoya hooyadeed ogaatay habdhaqankiisa, waxay ugu soo gudubtay guriga Shouko iyadoo wadata lacag aad u badan si ay ugu bixiso aaladda maqalka. Shoya hooyadeed waxay raaligalin ka bixisay magaca Shoyo waxayna balanqaaday in Shoya aysan waligeed sidan oo kale ugula dhaqmi doonin Shouko.
Markuu Shoya ka baxo dugsiga wuxuu ku biiraa Dugsiga Sare halkaas oo uu ugu boodayo Shouko waqti dheer ka dib. Waxaa la ogaaday inay ka tagtay iskuulka ay dhiganeysay Shoya sababihii uu ula dhaqmay dartiis. Tani dhammaantood waa muhiim marka la eego suurtagalnimada Cod Aamusnaan ah 2. Way ka carareysaa isaga waxayna bilaabeysaa inay ooyso. Tani inta badan waa halka sheekadu ka bilaabato, iyo goobihii iskuulka lagu xoogsheegtay ee la soo dhaafay waxay ahaayeen aragti hore oo hore.
Sheekada inteeda kale waa Shoya oo isku dayeysa inay ka dhigto Shouko iyadoo baraneysa luqadda dhegoolaha oo si tartiib ah ugu digaysa iyada. Labadooda waxay wajahayaan caqabado badan, maadaama ay ku jees jeesi jireen Shoya saaxiibkeed, Ueno sababta oo ah wuxuu u cagajugleyn jiray iyada iyo hooyada Shouko, oo aan aqbali karin xiriirkooda cusub ama labada wada jooga.
Astaamaha ugu Muhiimsan - Cod Aamusan 2
Shouko Nishimiya wuxuu u shaqeeyaa sidii jilaa weyn ee dhanka Shoya. Laga soo bilaabo macallimiinta POv way iska cadahay in dhammaan Shouko ay rabto inay ku qabato iskuulka ay ku habboon tahay kuna biirto asxaabteeda kale ee ay isku fasalka yihiin barashada iyo ku raaxeysiga nolosha dugsiga. Dabeecada Shouko waa mid xishood iyo naxariis badan.
Waxay u muuqataa inay la tartamayso qofkasta, guud ahaanna waxay isku dayeysaa inay la jaanqaado, la heesato iyaga iwm. Shouko waa dabeecad aad u jecel waxayna u dhaqantaa si aad u daryeel badan, taasoo adkeyneysa in la daawado markii la caayo oo la maadeysto. Waxay ka soo muuqan doontaa Cod Aamusnaan ah 2.
Shoya Ishida uma muuqdo inuu ku shaqeynayo danahiisa wuxuuna caadi ahaan raacaa waxa qof walba oo kale sameynayo. Tani waxay dhacdaa inta badan qaybta hore ee filimka, halkaas oo Shoya ay ku sii socoto xoog sheegashada Shouko. Shoya mas'uuliyad kama saarin ficilkiisa illaa heerkiisa qaangaarnimo.
Shoya waa mid firfircoon oo cakiran, in badan oo ka soo horjeedda Shouko. Isagu ma ahan mid xariif ah, caadi ahaan waafaqsan waxa loo sheegay. Wuxuu ka soo muuqan doonaa Cod Aamusnaan ah 2.
Dabeecado-hoosaadyo - Cod Aamusan 2
Xarfaha hoose ee Aamusnaanta Codka ayaa door aad u muhiim ah ka ciyaaray horumarka sheekada udhaxeysa Shoya iyo Shouko, iyagoo siinaya taageero shucuureed labada jilaa isla markaana u dhaqmaya sidii hab looga baxo jahwareerka iyo xanaaqa. Xarfaha hoose ayaa si aad u wanaagsan loo qoray tanina waxay ka dhigtay kuwo aad u khuseeya, sidoo kale jilayaal hoosaadyo sida Uneo, oo loo adeegsaday xoogaa yar intii lagu jiray qeybtii hore ee filimka ayaa si weyn loogu daray oo waxaa la siiyay qoto dheer dhamaadka.
Waan ku jeclaa tan filimka waxayna ka dhigtay dabeecad kasta mid aad u muhiim ah oo la xasuusto, sidoo kale waa tusaale aad u fiican oo ku saabsan horumarka jilaaga si sax ah loogu sameeyay filim. Dhammaantood waxay u badan tahay inay kasoo muuqdaan Cod Aamusnaan ah 2.
Sheeko Muhiim ah oo Sii Socota - Cod Aamusnaan ah 2
Qeybtii hore ee filimka ayaa muujinaya Shouko iyo Shoya waayihii hore iyo sababta uu u xoogsheegtay oo uu ula macaamilay markii hore. Waxaa loo muujiyey inay iyadu rabtay inay saaxiib la noqoto tanina sheekada waxay ka dhigeysaa mid qiiro badan. Muuqaalka ugu horeeya ka dib gogol dhigga Shouko iyo Shoya ee iskuulka ayaa wada arkaya labada Shouko iyo Shoya inay isku dhacaan iskuulka cusub ee ay dhiganayaan.
Markay Shouko garwaaqsato inay tahay Shoya horteeda ayay istaagtay waxay isku daydaa inay cararto oo isqariso. Sheekada ugu weyn ee filimka koowaad aad ayey muhiim u tahay marka la eego suurtagalnimada Cod Aamusnaan ah 2.
Shoya ayaa soo qabatay waxayna u sharaxday (in sign langauge) Shiouko in sababta uu u baacsanayay ay ahayd iyada oo ka tagtay buugeeda. Mar dambe Shoya ayaa markale isku dayaysa inay aragto Shouko laakiin waxaa istaajiyay Yuzuru oo loo sheegay inuu iska tago. Kani waa kan ugu horreeya isku day xarig ah oo ay isku dayday Shoya si ay u gaarto Shouko waana tan meesha filimka intiisa kale uu ku wajahan yahay, iyada oo inbadan oo ka mid ah qorshooyinka kale ee hoose iyo qaloocinta sidoo kale, taas oo ka dhigaysa mid aad u xiiso badan.
Ma arki doonaa taxane ah? - Cod Aamusnaan 2
Tixgalku ma noqon doono mid aan macquul ahayn waxaana sharraxayaa sababaha:
Qoraagu wuxuu u baahan doonaa inuu qoro sheeko kale oo labaduba ku lug leeyihiin Shoukou iyo Shoya.
Sheekadu waa inay noqotaa mid ku saabsan daboolka dadka waaweyn maaddaama filimkii ugu horreeyay uu ku saabsanaa koritaanka.
Haddii taxane xitaa faa'iido u noqon lahaa shirkadda wax soo saarka ee abuurta Cod Aamusan.
Haddii fanaanku awoodo inuu la yimaado sheeko wanaagsan waqtiga.
Haddii jadwalku ka fiicnaan doono kii asalka ahaa ama xitaa ka sii fiicnaan lahaa.
Waxaan rajeyneynaa inaan si dhaqso leh u heli doonno jawaabaha laakiin hada kan waa kan Codka Aamusan waa filim aad u taabasho badan isla markaana ka hadlaya mowduucyo kala duwan. mararka qaarkoodna waxaan ku qabanaa wax ku qasab ah aakhirkiina waxaan ka qoomameynaa dhowr sano intaas ka dib. Filimkani waa matalaad muuqaal ah oo ku saabsan go'aannada sidaas oo kale ah laakiin wuxuu kaloo keenayaa isku-dhafnaan wanaagsan oo dhowr shucuur ah oo isku dhafan.
Goorma ayuu silsiladda sii deyn lahaa? - Cod Aamusnaan 2
Waxaan dhihi lahaa marka la eego wax kasta oo aan kor ku soo wada hadalnay iyo waliba sababaha keenaya in Codka Aamusan uu sii deyn karo waqti kasta inta u dhaxeysa 2023 iyo 2024. Tani waa mala awaal oo waxay kuxirantahay sababaha laxiriira. Waxaan rajeyneynaa haddii waxyaabo cusub la qoro waxaan arki doonnaa Xilliga Codka Aamusnaanta 2, laakiin hadda waa intaas oo aan dhihi karno.
Sii deynta suurtagalka ah iyo kuwa soo socda
Tags: codka aamusnaanta codka aamusan2 asilentvoice2oseel qoraal aamusan aasilentvoicemoviesequel codka aamusan
Gelitaan Hore Quintuplets Quintessential - Taariikhda 2 Premier premier
Gelitaanka Xiga Isuzu Sento-Astaanta Astaanta